Daabacaadda & Warshadda -tolka - Shiinaha Xirmada & Soo -saareyaasha -xidhka iyo alaab -qeybiyeyaasha
Badeecadaha dharka ee taariikhda dheer, oo hadda lagu sameeyay mashiin Warshadeena oo la aasaasay 1984, waxaan leenahay waaya -aragnimo badan oo ku saabsan alaab -daabac & tolmo. Shaqaalaheena kaliya ayaa ku shaqayn kara mashiinno badan. Hal mashiinna wuxuu heli karaa 20-30pcs isla alaab isku mid ah. Waxaan ka dhigeynaa soosaarista alaabtaan dharka inay noqdaan kuwo tayo sare leh. Markaas macaamiishu waxay ku heli karaan qiimo jaban. Waxaan bixin karnaa alaab daabac ah iyo tolmo wanaagsan. Alaab -xirmooyinka & alaab -xidhka ayaa caan ku ah qayb ka mid ah qurxinta dharka/koofiyadaha/bacaha. Gaar ahaan MOQ -ga hooseeya iyo waqtiga wax -soo -saarka gaagaaban ee naqshadeynta la habeeyay. Macaamiil aad u tiro badan ayaa dooranaya kuwan si ay u sameeyaan summadooda/naqshaddooda ka dibna ku dheji alaabada waaweyn. Oo noocan oo kale ah logo ka xasilloon, iyo marar badan ka dib dhaq weli sii sida asalka ah. Astaanta daabacaaddu waxay leedahay saamayn 3D. Iyo qaar ka mid ah naqshadaha gaarka ah, waxay ka dhigi kartaa naqshadda mid muuqata. Tusaale ahaan, xayawaanka qaar timo leh. Xargaha ayaa timaha ka dhigi kara kuwo dhab ah muuqaalka iyo taabashada labadaba. laakiin qaar ka mid ah astaanta yar yar iyo xarfaha la tolay ayaa heli kara faahfaahin ka fiican. Oo waxaan ku samayn karnaa xidhmo leh calaamad daabacan hal shey. Had iyo jeerna waxaan siinnaa macaamiisheena soo jeedinta ugu fiican. Ku soo dhowow noo soo dir naqshaddaada!
Bar darajo / Darajo Ciidan Bar / Darajo Ciidan / ...